Ungayibhala kanjani incwadi yekhava yomfundaze | Ukwakheka nezifundo
Ungayibhala kanjani incwadi yekhava yomfundaze
UMaite Nicuesa | | Amathiphu, Ukufaneleka nokuqashelwa
Enye yemikhuba ejwayelekile yomfundi ukubheka izisekelo zezifundo ezahlukahlukene ahlangabezana nazo nezidingo ezahlukahlukene. Abaningi ama-scholarships bacela eyodwa incwadi yokumboza ngumfundi. Okokuqala, kubaluleke kakhulu ukuthi unake umnqamulajuqu wokwethula umfundaze ukuze ungashiyi ukubhala kwencwadi kuze kube umzuzu wokugcina.
Iphrojekthi enkulu ngokwanele ukuthi iqale kusenesikhathi. Thola futhi ngobude bencwadi enconyiwe. Yonke le datha ingafundwa ezisekelweni zezifundo. Ukuba ngu- ukuqeqeshwa kwemfundo, bese uzama ukubhekisa kokufanelekayo kwezemfundo okwengeza kuze kube manje.
1 Ungakhethwa kanjani kumfundaze
2 Ngabe unikela ini emphakathini
Ungakhethwa kanjani kumfundaze
Zama ukubhala lezo izimo zengqondo nezimfanelo kungani ungumuntu ofanelekayo walowo mfundaze. Ngokufanayo, bhekisisa isisusa sakho, okusho ukuthi, zwakalisa ukuthi uzokwenzenjani uma ukhethelwe lo msebenzi. Isibonelo, uma kungumfundaze wokwenza ubudokotela, ungabhala iskripthi sephrojekthi yakho yethisisi nokuthi kungani isihloko osikhethile sibalulekile kusukela ekubukeni kwegalelo lakho emphakathini.
Lapho ubhala incwadi yekhava ukufaka isicelo somfundaze, kunconywa kakhulu ukuthi unakekele umbhalo osesimweni nokuqukethwe. Phinda ufunde imininingwane ukuze uyigweme amaphutha esipelingi futhi, amaphutha ekubhaleni umbhalo. Futhi noma ngabe uzibeka esimeni esisemthethweni njengezifundo, yiba nobuciko.
Abanye abantu banokungakhululeki ukukhuluma ngabo ngokwalo mbono. Kodwa-ke cabanga ukuthi nguwe uphawu lomuntu siqu. Ngakho-ke, kukuwe ukuthi uthuthukise ithalente lakho ngokukhuluma ngawe ngokuqiniseka. Cabanga ngokuthi ngabe lowo mfundaze usho ukuthini kuwe. Ukusekelwa kokuqeqesha kuyisisekelo esiyisisekelo esivumela umfundi ukuthi alungiselele ikusasa ngokuxhaswa kwezezimali. Ngakho-ke, khumbula ukuthi kuzoba nomncintiswano, abanye abazongenela ukhetho nabo bazofaka izicelo zalowo mfundaze. Noma kunjalo, kufanele ukholwe kuwe.
Ngabe unikela ini emphakathini
Funda ngokucophelela ukuthi yiziphi izidingo ezihlolwe ukukhetha abazobhapathizwa bese uthatha la maphuzu njengesethenjwa sokubhala imininingwane ethile.
Encwadini eyisembozo kufanele kucace ukuthi ungubani, uthini owakho izinhlelo zesikhathi esizayo Masinyane ezingeni lezemfundo, kungani unentshisekelo kulowo mfundaze nokuthi yini ongayenza emphakathini uma uzuza ngalolo sizo. Ngale ndlela, ukhombisa ukuthi lolu sizo ulubona njengenkonzo ozoyibuyisela emphakathini; sibonga ithalente lakho, ukuqeqeshwa kwakho nolwazi lwakho. Okusho ukuthi, uthola umfundaze okwamanje; Kepha lokhu kulungiselela kuzoba yifa elihle kakhulu lesikhathi esizayo ukuthi njengochwepheshe esifundweni esithile, kungakugqugquzela ukuthi uguqule umphakathi ngandlela thile.
Vala le ncwadi eyisembozo ngo umyalezo wokubonga ngokunakwa okutholakele.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » Izaziso » Amathiphu » Ungayibhala kanjani incwadi yekhava yomfundaze
Ungazizwa kanjani uhle ngenkampani yakho
Izifundo zamahhala eziku-inthanethi ezivela kwaGoogle